တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ (Pandemic) အဖြစ် ထုတ်ပြန်ထားသော Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်ကူးစက် ပြန့်ပွားမှုမရှိစေရေး အတွက် ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံတော်မှ အမျိုးသားအဆင့်အနေဖြင့် သတ်မှတ်၍ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် ``မြန်မာနိုင်ငံ ဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းအသင်း (MAJA)`` မှ အလှူငွေကျပ် (၁၅)သိန်း (တစ်ဆယ့်ငါးသိန်း ကျပ်တိတိ) ကို ၉.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် လှူဒါန်း ခဲ့ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ကာလ ရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်‌သော 10.4.2020 မှ 19.4.2020 အထိရက်များတွင် MAJA Head office၊ MAJA Education Centre နှင့် MAJA Office (Mandalay Branch) များအား ခေတ္တပ်ိတ်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဧပြီလ 20 ရက်နေ့တွင် ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးမှာ ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖြာဖြာနှင့် ပြည့်စုံပါစေကြောင်း၊ ချစ်သောမိသားစုများနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်..
Please kindly be informed that MAJA Head Office and MAJA Education Centre and MAJA Office (Mandalay Branch) will be closed during Thingyan Holidays, starting from 10-April-2020 (Friday) to 19-April-2020(Sunday). We will reopen the office on 20-April-2020 (Monday).
We wish all of you haveapleasure time with family during holidays.